कसरी तपाइँको फेसबुक खाताको पासवर्ड परिवर्तन गर्न ग्याजेट समाचार
फेसबुक आफूलाई विश्वव्यापी सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको सामाजिक नेटवर्कको रूपमा कायम राख्नका लागि परिचित छ। यसमा २ अरब भन्दा बढी व्यक्तिको खाता छ। धेरै व्यक्तिले फोटो, सन्देशहरू, भिडियोहरू अपलोड गर्दछ वा धेरै व्यक्तिसँग सन्देशहरू लेख्छन्। त्यसो भए पासवर्ड तपाईले पहुँच गर्नु पर्छ सामाजिक नेटवर्कमा तपाईंको खातामा ठूलो महत्त्वको हुन्छ।
यो यस कारणले हो कि कुनै समयमा यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ। कि त हामी हाम्रो खाताको सुरक्षा सुधार गर्न चाहान्छौं वा किनकि हामी फेसबुक खातामा पुन: पहुँच गर्न चाहन्छौं किनकि हामी पासवर्ड बिर्स्यौं। दुबै केसहरूमा हामी तपाईंलाई पछ्याउने चरणहरू देखाउछौं पासवर्ड परिवर्तन गर्न, समान प्रक्रिया जुन तपाईले जीमेलमा लिनु पर्छ उही परिस्थितिमा।
स्थितिमा निर्भर गर्दै, पछ्याउनको लागि कदमहरू फरक हुनेछन्, तर कुनै पनि समयमा यो जटिल छैन। तपाइँ केवल तपाइँको केस के हो ध्यानमा राख्नु पर्छ। यदि तपाईं नयाँको लागि आफ्नो फेसबुक पासवर्ड परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ भने, यसलाई अझ सुरक्षित वा सम्झनको लागि बनाउनुहोस् वा यदि तपाईंले पहुँच पासवर्ड बिर्सनुभयो भने।
1 फेसबुकमा पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस्
2 यदि तपाईंले आफ्नो पासवर्ड बिर्सनुभयो भने
फेसबुकमा पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस्
हामी पहिलो परिस्थितिमा केन्द्रित छौं। तपाईंले सामाजिक नेटवर्कमा तपाईंको हालको पासवर्ड परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्नुभयो। यो गर्न, हामीले गर्नु पर्छ नयाँ पासवर्ड को लागी सोच्नुहोस्, जुन सुरक्षित हुनुपर्छ तर सम्झन पनि सजिलो छ। तपाईं यो गर्न सँधै सरल तरिकाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै चिठ्ठी घुसाएर - यसमा। प्रतीकहरू अक्षर र संख्याहरू बीच पनि प्रविष्ट गर्न सकिन्छ। यस तरिकाले, यो अधिक सुरक्षित हुनेछ र ह्याक गर्न वा अनुमान गर्न गाह्रो हुनेछ।
तसर्थ, हामीले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको फेसबुक प्रविष्ट गर्नुहोस्। एक पटक सामाजिक नेटवर्क भित्र, तल वाणमा क्लिक गर्नुहोस् जुन स्क्रिनको माथिल्लो दायाँ भागमा देखा पर्दछ। यो गर्नाले प्रस menu्ग मेनुमा विकल्पहरूको श्रृंखला लिनेछ। हामीले चुस्नु पर्छ कन्फिगरेसन विकल्पमा, ती मध्ये एक सूचीको अन्तमा देखा पर्दछ।
अर्को, जब हामी कन्फिगरेसन भित्र हुन्छौं, हामी मेनुमा हेर्छौं जुन स्क्रिनको बाँया पट्टि देखा पर्दछ। त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्। एउटा जुन यस समयमा हामीलाई रुचि छ यस मेनुको विकल्पहरूको दोस्रो हो। यो नाम सुरक्षा र लगईनको साथ अनुभाग हो। त्यसकारण, हामी यसमा क्लिक गर्दछौं, ताकि यस सेक्सनलाई सन्दर्भित गर्ने विकल्पहरू स्क्रिनको बीचमा देखा पर्दछ।
तपाईं देख्न लाग्नु भएको छ कि बीचमा सेक्सन मध्ये एक पासवर्ड परिवर्तन गर्नु हो। दायाँ पट्टि त्यहाँ पाठ, सम्पादन सहितको बटन छ, जसमा तपाईंले क्लिक गर्नुपर्दछ। त्यसो भए हामीले पहिले परिचय दिनु पर्छ वर्तमान पासवर्ड हामी फेसबुक मा प्रयोग गर्दछौं। त्यसो भए हामीले नयाँ पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। यो राम्रोसँग सोच्न महत्त्वपूर्ण छ कि हामी यस अवस्थामा सामाजिक नेटवर्कमा हामी के नयाँ पासवर्ड प्रयोग गर्ने छौं।
अर्को, हामी नयाँ पासवर्ड दोहोर्याउँछौं र त्यसो भए हामी परिवर्तनहरू बचत गर्न बटन दिन्छौं। यस तरीकाबाट तपाईले पहिले नै आफ्नो पासवर्ड परिवर्तन गर्नुभयो सामाजिक नेटवर्कमा पहुँच गर्नका लागि। केहि धेरै सरल चरणहरू, तर यसको मतलब यो हुन सक्दछ कि तपाईंले सामाजिक नेटवर्कमा तपाईंको सुरक्षालाई महत्त्वपूर्ण तरिकाले बढाउनु भएको छ।
यस्तो हुन सक्छ कि तपाई सँधै फेसबुकमा लग ईन हुनुहुन्छ, वा तपाईसँग ब्राउजरमा पासवर्ड बचत भएको छ। त्यसकारण, यो हुन सक्छ कि जब तपाईं यो चरण गर्न जानुहुन्छ, तपाईं आफ्नो अघिल्लो पासवर्ड सम्झनुहुन्न। यदि यो केस हो भने तपाईंले बटनमा क्लिक गर्नुपर्दछ पासवर्ड बिर्सनुभयो? जब तपाईं यो गर्नुहुन्छ सामाजिक नेटवर्क चरणबद्ध को एक श्रृंखला मा तपाइँलाई मार्गदर्शन गर्नेछ एक सुरक्षित तरिकामा जे भए पनि पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्षम हुन।
यदि तपाईंले आफ्नो पासवर्ड बिर्सनुभयो भने
एक अवसर जुन हामीलाई अवसर मा हुन सक्छ कि त्यो हो हामी फेसबुक पहुँच गर्न पासवर्ड बिर्स्यौं। भाग्यवस, यदि यस्तो भए पनि हामी पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्षम हुनेछौं। यो एक कदम हो कि सामाजिक नेटवर्कले हामीलाई यसमा हाम्रो खातामा पहुँच पुन: प्राप्त गर्न सक्षम हुन हामीलाई थोप्दछ। यी कदम कुनै पनि जटिल छैनन्।
हामीले सामाजिक नेटवर्कको गृह पृष्ठमा जानुपर्नेछ, जुन तपाईं पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ यस लिङ्कबाट। त्यहाँ, हामी पर्छ हाम्रो लगईन विवरण प्रविष्ट गर्नुहोस्। यस अवस्थामा, तपाईले इन्टर गर्नु पर्ने कुरा ईमेल हो। एक पासवर्ड प्रयास गर्नुहोस्, यदि तपाईंलाई एक याद आयो भने, प्रयास गर्नुहोस् यदि यो सहि हो भने। यदि होईन भने, हामी त्यो चरणहरूमा सहारा लिन्छौं जुन सामाजिक नेटवर्कले हामीलाई यसलाई पुनः पहुँच प्राप्त गर्न सक्षम हुन प्रदान गर्दछ।
तपाईले देख्नुहुनेछ कि उपयोगकर्ता नाम र पासवर्ड बक्स अन्तर्गत त्यहाँ पाठ छ। एक प्रश्न जसले भन्छ कि तपाईं आफ्नो खाता विवरण बिर्सनुभयो? यो पाठ हो जसमा हामीले यस स्थितिमा क्लिक गर्नुपर्दछ, किनकि हामीसँग सामाजिक नेटवर्कमा लग ईन गर्ने पासवर्ड याद छैन। पहिलो कुरा उनीहरूले तपाईलाई नयाँ स्क्रीनमा सोध्ने छन् तपाईको ईमेल खाता प्रविष्ट गर्नुहोस् वा उक्त खातासँग सम्बन्धित फोन नम्बर। दुई मध्ये एक डाटा प्रविष्ट गर्नुहोस् र खोजी बटन थिच्नुहोस्।
त्यसपछि, फेसबुकले घोषणा गरेको छ कि उनीहरूले कोड पठाएको छ। ती ईमेल खाता वा फोन नम्बरमा गर्छन् जुन तपाईंले त्यस समयमा स्थापना गर्नुभयो। त्यसोभए तपाईले एउटा ईमेल वा SMS प्राप्त गर्नुहुनेछ, जसमा हामीले रिकभरी कोड फेला पार्दछौं। तपाइँले के गर्नु पर्छ वेबमा यो कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्, सामाजिक नेटवर्कमा खातामा पुन: पहुँचको लागि। कोड प्रविष्ट गर्नुहोस् र जारी बटनमा थिच्नुहोस्।
अर्को स्क्रिनमा तपाईंलाई नयाँ पासवर्ड प्रविष्ट गर्न सोधिनेछ तपाइँको खाता फेरि प्रविष्ट गर्न सक्षम हुन। त्यसकारण, एक पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् जुन सुरक्षित छ, तर त्यो जुन तपाईले जहिले पनि याद गर्न सक्नुहुनेछ। जब तपाई यो प्रविष्टि गर्नुहुन्छ र दोहोर्याउनुहुन्छ, सुरक्षा कारणका लागि, तपाईं सामान्य रूपमा फेसबुकमा लग इन गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। नयाँ पासवर्ड अद्यावधिक हुनेछ र तपाईंसँग पुन: सामाजिक नेटवर्कमा तपाईंको खातामा पहुँच छ।
एक पटक सामाजिक नेटवर्क भित्र तपाईले आफ्नो खाता सामान्य सम्पूर्णताका साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कार्यहरू गर्न सक्षम हुनुभयो जस्तै पृष्ठ सिर्जना गर्न, केहि चीज जुन तपाई सिक्न सक्नुहुन्छ। यो ट्यूटोरियल पढ्दै.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ट्यूटोरियलहरू » कसरी फेसबुक पासवर्ड परिवर्तन गर्ने
स्नाइडर SC300SND एक सानो, कार्यात्मक साउंडबार हो [समीक्षा]